Ọdụ ụgbọ elu Keflavik mejupụtara ikike German furu efu ngwa ngwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ọdụ ụgbọ elu Keflavik mejupụtara ikike German furu efu ngwa ngwa
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ kacha ọhụrụ na Iceland • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Agbanyeghị ọghọm ụgbọelu na-efu n'oge na-adịbeghị anya site na ọkpụkpọ ụgbọelu ụgbọelu ya, ọdụ ụgbọ elu Icelandic na-enwe mmeghachi omume ozugbo iji mejuo ikike furu efu.
Ọdụ ụgbọ elu Keflavik gosipụtara mmepe nke njikọ German ya na mwepụta nke ụgbọ elu Icelandair na Berlin Tegel taa. N'agbanyeghị ọnwụ ụgbọ elu na-adịbeghị anya site na oku na-akpọ ụgbọ elu ya, ọdụ ụgbọ elu Icelandic na-enwe mmeghachi omume ozugbo iji mejupụta ikike furu efu, na-eme mkpebi mkpebi nke ụlọ ya na-arụ ọrụ ugboro atọ kwa izu na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa bụ isi nke Berlin.
Dịka ahịa Keflavik nke atọ kachasị ukwuu, n'azụ naanị UK na US, ọnụ ụzọ ámá nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oche 6,400 kwa izu na-enye Germany. Site na njikọta gbasaa na ọdụ ụgbọ elu ise nke mba ahụ, Keflavik jikọtara Frankfurt, Munich, Berlin Schönefeld, Berlin Tegel na Hamburg. Na-ejuputa oghere nke ikike nke ụgbọ elu ahụ hapụrụ, ọrụ Icelandair kachasị ọhụrụ na-esonye na ụgbọ elu ya na-aga kwa ụbọchị na Frankfurt na Munich, yana ọrụ izu abụọ na Hamburg. Gbọ elu Iceland dị ọnụ ala, ikuku ikuku, na-ejikọ njikọ kwa ụbọchị na Frankfurt na Berlin Schönefeld, yabụ ndị na-ebu Icelandic ugbu a nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 95% nke oche niile edoziri site na Keflavik gaa Germany - 5% fọdụrụnụ nke Lufthansa si Frankfurt rụọ ọrụ.
Hlynur Sigurdsson, Onye Nchịkwa Azụmaahịa, Ọdụ ụgbọ elu Keflavik na-ekwu, sị: “Mwepụta nke ụbọchị a bụ ihe ngosi doro anya doro anya na anyị gbalịsiri ike iji hụ na ndị njem anyị na-anọgide na-enweta nhọrọ kacha mma na enweghị mmetụta ọ bụla na mfu ndị a na-adịbeghị anya. Anyị na Icelandair rụkọrọ ọrụ ọsọ ọsọ iji mejupụta oghere dị n'otu ahịa mba anyị kachasị ike, yana ndị ọzọ anyị na ha na-arụkọ ọrụ ụgbọ elu, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị nwee ike igbo mkpa. "
N'iji ụgbọ mmiri nke 183-oche 757-200s nke ụgbọelu mee ihe na njikọ ọhụrụ ya na Berlin Tegel, mpaghara mpaghara 2,404 ahụ ghọrọ Icelandair nke 32 nke si Keflavik.